China Ultrasonic probe sterilizer PBD-S3 Ukukhiqiza nefektri | Doneax
I-ultrasonic probe sterilizer PBD-S3
I-Ultrasound probe sterilizer PBD-S3 ngumkhiqizo we-ultrasonic probe disinfection osebenzisa ubuchwepheshe obuningi obuningi. I-PBD-S2 isebenzisa ubuchwepheshe obubandayo bokukhanya kwe-disinfection technology ukuqedela ukubulawa kwe-othomathikhi kwephenyo le-ultrasound ngemizuzwana engama-30-60, esebenza kahle, esheshayo futhi enobungani bemvelo. Ixazulula inkinga ye-probe disinfection, inciphisa ubungozi bokutheleleka nge-probe, futhi ifinyelele ekubekeni amagciwane imininingwane yezobuchwepheshe kumuntu oyedwa ngasikhathi. Ukubulala amagciwane kanyekanye kwama-probe amabili kungafinyelelwa ngasikhathi sinye, konga izindleko nesikhathi futhi kuqaphela ukuqamba nokuqamba kabusha ekubulaweni amagciwane kwe-ultrasound probes!
1. Inkomba yepharamitha:
1) Hlakulela UVLED imvamisa ephezulu kanye nobude obuphansi obubandayo be-ultraviolet disinfection technology.
2) Isikhathi sokusetshenziswa kwe-UV LED yiminyaka engu-≥3, kanti ububanzi be-UV spectrum bungu-250 ～ 280nm.
3) Amandla wephuzu eliphakathi nendawo: amandla wokukhanya ku-6cm ngu- ≥500uw / ​​cm2.
4) Ukusetha isikhathi sokusebenza: imizuzwana engama-30 nengama-60.
5) Ukubulala amagciwane osezingeni eliphakeme kuqedwa ngemizuzwana engama-60, kanti izinga lokuvala inzalo le-Bacillus subtilis lingu- ≥99.9%.
6) Finyelela ukubulala amagciwane ezingeni eliphakathi ngemizuzwana engama-30, E. coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Mycobacterium chelonae, njll ≥99.9%.
7) Ukubulala amagciwane ngokomzimba, akukho monakalo kwi-acoustic lens kanye ne-probe housing, kanye nokunakekelwa okuvamile kwezindlu zephenyo ezinezingubo zokulwa namagciwane.
I-8) Idizayini yethangi yokubulala amagciwane kabili ingabulala amagciwane ama-probe amabili ngasikhathi sinye, elinye lawo iphenyo le-intracavity.
9) ikhava ye-flip ezenzakalelayo ngokuphelele kanye nokubulala amagciwane okuhlakaniphile okugcwele.
10) Ukuboniswa kwedijithali kwesikhathi sokubulala amagciwane.
I-11) Islobe sephenyo sinenzwa yokuma eqondile eyakhelwe ngaphakathi, ethola ngokuzenzakalela ukuthi ngabe kukhona iphenyo nokuthi ngabe iphenyo lenziwe yini. Ngemuva kokuqeda ukubulala amagciwane, akudingeki ukubulala amagciwane okuphindaphindiwe.
I-12) Idizayini eyenziwe njengomuntu, ukukhululwa kancane, ayithinti isikhathi sikadokotela.
13) Kuthatha isikhala esincane futhi kulula ukuhamba.
I-14) Ifanele isisu, izitho ezincane, inhliziyo, isitho sangasese sowesifazane, i-rectum, ne-probe ye-intraoperative.
15) Usayizi we-Host: 430X218X130MM, isisindo senetha semishini ≤25KG.
16) Izimo zokusebenza
Izinga lokushisa eliphakeme: (5 ～ 40) ℃, umswakama isihlobo: (30 ～ 75)%
Amandla kagesi: ~ 220V, imvamisa yokuhambisa ugesi: 50Hz
17) Isikhathi sesiqinisekiso: izinyanga eziyi-12.
18) insizakalo yamahora angu-7X24
Thayipha Idivayisi yokuvala inzalo ye-Ultraviolet
I gama le-brand DONEAX
Inombolo yemodeli I-PBD-S3
Indawo Yomsuka I-China
Ukuhlukaniswa kwensimbi Isigaba II
Iwaranti Unyaka o-1
Isevisi yokuthengisa ngemuva Ukwesekwa kwezobuchwepheshe ku-inthanethi
Isicelo Amadivayisi Wezokwelapha Esibhedlela
Umbala okuluhlaza okwesibhakabhaka
Isikhathi sokubulala amagciwane Seconds imizuzwana engama-60
Ububanzi be-UV LED Spectral 260-280nm
I-UV LED Voltage 5.5-7.5V
UV LED yamanje Ma200ma
Amandla wokukhanya wokukhipha M10mw
Amandla we-Module UV LED ≥500μw / cm2 (7cm ukusuka maphakathi)
Usayizi we-Host L428mm * W218.8mm * H207.6mm
Induku yokusekela (indawo, ukuphakama) usayizi 50mm * 50mm, ukuphakama 580-1000mm
Amandla wokufaka AC 220V 50HZ
Kukalwe amandla ≤90W 50Hz
1) Ukuqamba: ukukhanya okuphezulu kwemvamisa nokukhanya okuncane okubandayo kwe-ultraviolet kuhlanganiswe nezindlela zokukhipha igciwane ezinhle nezimbi
2) Kuyashesha: Kudinga kuphela ama-30S, 60S ukuqeda ukubulala amagciwane ezingeni eliphakathi neliphezulu nokuvala inzalo.
3) Ukuphepha: Ukubulala amagciwane okuzenzakalelayo ngokuphelele ngaphandle kokungenelela okwenziwa ngesandla, kuphephile futhi kunokwethenjelwa.
4) Ukuvikelwa kwemvelo: Ubuchwepheshe bokubulala amagciwane be-LED bunempilo ende, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, futhi bulungele imvelo.
5) Okukhaliphile: Kubeke kahle, ngaphandle kokushintsha imikhuba kadokotela, ukubulala amagciwane okuhlakaniphile nokuzenzekelayo.
6) Thulisa: ukuhlukaniswa okukhethekile nemodi yokusebenza eyisimungulu egcwele, azikho izinto eziphazamisa umsindo.
I-Ultrasound Probe Sterilizers
Ingaphakathi le-sterilizer lisebenzisa ubuchwepheshe be-UV LED high-frequency and low-wavelength cold ultraviolet light technology technology plus ion light technology, using the probe cup holder, automatic lifting system and induction sensor on the rod rod of the machine, 30 seconds, 60 seconds ukuqedela iphenyo le-ultrasonic Medium and high-level disinfection and inzalo, esebenza kahle, esheshayo, futhi enobungani bemvelo, ukuxazulula inkinga ye-probe disinfection, ukunciphisa ubungozi bokutheleleka nge-probe, nokufeza izidingo zomuntu oyedwa, ukusetshenziswa okukodwa, ukubulala amagciwane okukodwa incazelo ye-disinfection.
Kusetshenziswa umfutho othize wokukhanya okubandayo kwe-260nm-280nm okukhanya okubandayo okukhiqizwa yi-ultraviolet LED, ilambu elibandayo le-ultraviolet libhubhisa ngokushesha isakhiwo samangqamuzana neprotheyini ye-DNA (deoxyribonucleic acid) noma i-RNA (i-ribonucleic acid) kumaseli ezinto ezincane, okudala ukukhula kweseli ukufa Futhi (noma) ukuvuselelwa kweseli lokufa ukuze kutholwe inzalo. Ukukhanya okubandayo kwe-ultraviolet kunezimpawu zokuvama okuphezulu nobude obude obufushane, okungagcina ubuso bento ekhanyisiwe ngaphandle kokulimala ngenkathi ibulala amagciwane ngokushesha. I-ion yangaphakathi yamandla aphezulu kanye namandla amabi aqaphela ukubulala amagciwane esikhala ngakuthathu, futhi ingabulala amagciwane kwezinye izikhala namakhona.
1) 30S, 60S angaqedela okuphakathi naphezulu kwezinga lokubulala amagciwane kanye nokuvala inzalo
2) Ukubulala amagciwane ngokomzimba, akukho monakalo kulayini we-acoustic nasendlini yophenyo.
3) I-probe groove ingashintshwa nganoma yisiphi isikhathi ngokuya ngesimo sephenyo.
4) Ukuphakamisa okuzenzakalelayo, wonke umsebenzi wokuthula, konke ukubulala amagciwane okuhlakaniphile.
5) Ukuboniswa kwedijithali kwesikhathi sokubulala amagciwane.
I-6) Inzwa ye-infrared yakhelwe esakhiweni se-probe, esingathola ngokuzenzakalela ukuthi ngabe kukhona iphenyo noma cha.
7) Ngemuva kokuthi kuqedwe ukubulala amagciwane, ukubulala amagciwane ngeke kuphindwe.
I-8) Idizayini eyenziwe njengomuntu, ayishintshi umkhuba kadokotela wokusebenzisa amaphenyo.
Umsingathi 1 isethi
Isisekelo 1 ucezu
Ikholomu 1 ucezu
Hlolisisa uwoyela wokunakekela Ibhodlela elilodwa
Isikulufu se-M10 1 ucezu
Imanuwali yokufunda, isitifiketi, ikhadi lewaranti Ikhophi eli-1
Langaphambilini I-ultrasonic probe sterilizer PBD-S1
Olandelayo: Indawo yokugcina impahla yamathuluzi nemishini
Ukuhlolwa kwesisu se-Ultrasound
Ukuhlolwa kwe-Bluetooth Ultrasound
Ucwaningo lwe-Cardiac Ultrasound
Idivayisi ye-Ultrasound ephathwa ngesandla
Isandla se-Ultrasound Probe
Umshini we-Medical Ultrasound
I-Medical Ultrasound Transducer
Ucwaningo lwe-Medical Ultrasound
I-Phased Array Probe Ultrasound
Ukuhlolwa kwe-Ultrasound ephathekayo
Ukuhlolwa kwe-Robotic Ultrasound
Ucwaningo oluncane kakhulu lwe-Ultrasound
Imishini Yomshini We-Ultrasound
Izinhlobo Zomshini We-Ultrasound
Intengo yokuhlola ye-Ultrasound
I-Usb C Ultrasound Probe
Ucwaningo lwe-Usb Ultrasound
Ukuhlolwa kwe-Wifi Ultrasound
Ukuhlola okungenantambo kwe-Ultrasound
Intengo yokuhlola engenantambo ye-Ultrasound
Umakhalekhukhwini Ukuhlanzwa Kwesibulala-magciwane AirH-Y600H
Umakhalekhukhwini laminar flow flow machine AirH-Y2000H
Indawo yokugcina impahla yamathuluzi nemishini